10 Arimood oo yareeya rabitaamka kulanka sariirta ee dumarka ! - Buzuri texts
Waa maxay calaamadaha hammi yarida dumarka?
Dhibaato xagga galmada ah: tusaale ahaan haddii haweentu ay dareemeyso xanuun xilliga galmada “Dyspareunia” ama aysan awood u laheyn in ay raaxeysat “Anorgasmia” cilladahaasi waxay caqabad wayn ku noqon kartaa dareenkeeda iyo rabitaankeeda labadaba, waana cillado ay dumarka u arkaan ceeb in ay kala hadlaan xaasaskooda ama dhakhtarba.
Dhalmo la’aanta ama haweentu aysan uur yeelan karin iyadane waxay keentaa in ay yareyso rabitaanka iyo dareenka kacsiga.
Daawooyin: daawooyin badan ayaa keeno hami yarida sida daawooyinka niyad-jabka, daawooinka dhiig-karka, daawooyinka kansarka oo iyagane caan ku ah in ay keenaan dhibaatadaan iyo daawooyinka allerjiga loo isticmaalo sida sanboorka, neefta iyo xajiinta ee “Antihistamines”.
Daalka: Haweenta oo ku daasho xanaaneynta qof da’ah ama caruur badan ama shaqaale ah waxay ka qeyb qaadataa in ay yareyso rabitaanka iyo himada.
Sidee loo daaweeyaa hami yarida?
Badal nolol-maalmeedkaaga: samey jimicsi, iska yarey welwelka, noqo qof faraxsan, adkey murqahaaga miskaha adigoo sameeya jimicsiga “Kegel”.
Daawooyin ayaa jira kaa caawin kara arintaan taasoo marka ugu horeyso qasab ay tahay in meesha laga saaro haddii uu jiro cudur kaa hortaagan rabitaankaaga iyo himadaada sida aan kor ku soo
READ ALSO Halis ayad kujirtaa ee is bad baadi
Originally posted 2021-10-06 17:45:35.